Gadoodka Saraakiisha Ahlu-Suna iyo Gorgortan La’aanta Dowlada Federaalka | Allbanaadir.com
Home NEWS Gadoodka Saraakiisha Ahlu-Suna iyo Gorgortan La’aanta Dowlada Federaalka
Isla maalintaas, qoraal ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in dib loo fasaxay taageeradii la siin jiray Soomaaliya. Maraykanka waxuu gargaar raashin iyo shidaal siin jirtay ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS), taas oo la joojiyay December 2017, kadib markii hoggaanada – maaliyadda, saadka iyo ciidanka ay ku fashilmayn xisaab celin macquul ah, .
Dhinaca kale, Dowladda Federalka iyo madaxda Ahlu-Suna ayaa ku heshiiyey in caasimadda Maamul-Goboleedka Galmudug ee Soomaaliyeed ay ka dhacdo doorashada, isla markaasna ciidamada dowlada federalka ay sugaan amniga xilliga shirweynaha dib u heshiisiinta iyo doorashada.
Labadii sanadood ee ugu dambeysay, ciidamadda XDS waxaa laga lunsaday lacagdhan 28,080,000 doolar oo iskugu jirta mushaar, guno iyo raashin, haddana ilaa iyo hadda lama hayo cid loo horgeyay maxkamad .
W/Q Cabdulqadir Cariif Qaasim
Previous articleAas Qaran oo Muqdisho loogu sameeyay Gudoomiyihii Gobolka Banaadir (Daawo Sawirada)
Next articleOdayaal ‘ka baxsaday ciidan uu usoo diray’ Axmed Madoobe oo ka cararay Kismaayo iyo Wararkii ugu danbeeyay !!